Nnamdi Kanu enwerego onwe ya
Site na mkpebi onye okaịpke ukwu nyere n’ụlọ ikpe Hayị Kọt dị n’Abụja, isi obodo ala Naịjirịa, otu nwaafọ Igbo ụwa niile ma ama maka mbọ Ọ na-agba ka ndị Igbo nwete Biafra, abụrụgo onye nwere onwe ya ọzọ.
Nke a mere n’abalị iri abụọ n’ise nke ọnwa Eprelu afọ 2017. Onye ọkaịkpe bụ Binta Nyako ekpebigo ka A nara Nnamdi Kanu n’aka mbe site n’ịnwete mmadụ atọ ga-akwụ narị nde naịra, were gbara ya n’aka mbe.
Binta Nyako nyere Nnamdi Kanu iwu ka Ọ ghara ịza ndị nta akụkọ ajụjụ ọnụ, ma ọ bụ isonye n’ọgbakọ ọbụna ịhe karịrị mmadụ iri nọ na ya.
Nyako kwuru sị na A ga-eweghachị Nnamdi Kanu na mkpọrọ ma ọ bụrụ na Ọ daa iwu ndị a.
Ihe gbaziri ndị mmadụ gharị bụ na onye ọkaịkpe ahụ bụ Nyako ekweghị ka A tọghapụ mmadụ atọ ndị ọzọ E ji ha na Nnamdi Kanu.
Anyị nụkwara na ịhe kachara mee E jiri hapụ Maazị Kanu bụ na ya onwe ya ejichaghị ahụ.
Dọturu akụkọ a